musha Europe Fomura Imwe Dhiraivha Pierre Gasly Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Pierre Gasly Biography inokuudza chokwadi nezve nyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Jean Jacques Gasly naPascale Gasly), Hupenyu Hwemhuri, Kudanana / Hupenyu hupenyu.
Kunyanya zvakadaro, Pierre Gasly hafu hama (Nicolas Caron, Cyril Caron, Phillipe Gasly, naPaul Gasly), Lifestyle, Hupenyu HweMubhadharo, uye mambure akakosha.
Mumashoko akareruka, chinangwa ndechekuburitsa zvakadzama kutarisisa kweiye French mujaho Formula One mutambi. Nyaya yedu inotangira panguva yekuzvarwa kwake kusvika ave nemukurumbira.
Kuti uwedzere nyota yako yehupenyu, tarisa iyo gallery yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwake kubva pakutanga kwake.
Isu takaona zvakakodzera kuti tikuunze iwe Hupenyu hwake hwepakutanga uye Kubudirira mifananidzo. Pazasi pane nhanho-ne-nhanho snapshot yePierre Gasly's biography.
Pierre Gasly Biography: Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Ichokwadi; isu tese tinomuziva kuve French mujaho mutyairi uyo akabatsira kugadzira nhoroondo neScuderia AlphaTauri nekuvaisa pamusoro peFormula One podium. Unyanzvi hwake hwemitambo hunochengeta vateveri vake vari kukura vachifadzwa nguva dzose.
Pasinei nekurumbidzwa kwake, takaona kuti vanhu vazhinji havanyatso nzwisisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Naizvozvo, isu tafunga kuti zvinodikanwa nemufaro wese kukuunzira inonakidza ngano yaPierre Gasly uye kuparara kwezviitiko zvake zvemujaho. Saka, nekunonoka kupfupi, ngatitangei.
Pierre Gasly Wevacheche Nyaya:
Yedu yeBiography Nhau, isu tichatanga nekutaura nezvenhoroondo yake yekuzvarwa. Pierre Gasly akauya munyika ino pazuva re7th yaKukadzi 1996 kuna amai vake, Pascale Gasly, uye baba, Jean Jacques Gasly muRouen, Northern France.
Iyo Formula Imwe mota mujaho akaberekwa semwana mudiki pakati pehama dzake vana (Nicolas Caron, Cyril Caron, Phillipe Gasly, naPaul Gasly). Pierre Gasly nevane vake
vanin'ina mukoma vese vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vavo vakasiyana.
Nepo Nicolas Caron naCyril Caron vaibva kuwanano yaamai vake yapfuura, Phillipe Gasly naPaul Gasly vanobva kumuchato wababa vake wekare.
Izvi zvinoita kuti Pierre Gasly ave oga mwana wekubatana kwababa vake, Jean Jacques Gasly, uye amai Pascale Gasly, vane mufananidzo uri pasi apa.
Tarisa vabereki vaPascale Gasly - amai vake, Pascale Gasly nababa vake, Jean Jacques Gasly.
Makore ekukura aPierre Gasly:
Kubva pazera ramakore maviri, mujaho wechiFrench anga ari mutyairi pamucheto wemasekete, achikurudzira vakoma vake pakarting.
Pierre Gasly aingova nemakore matanhatu paakatanga Karting pane imwe nzvimbo karting track muAnneville-Ambourville. Akakurira mutaundi diki museine-maritime department reNormandy muFrance.
Iyo young chap yakakurira padhuze neiyo yakazotevera Anthoine Hubert. Ivo vaviri vange vachiita karting pamwechete kubva panguva yemakore 7. Pierre akakurawo nevanofarira ve Charles Leclerc uye Esteban Ocon.
Zvisinei, pamakore gumi nematatu, akatamira kuchamhembe kweItaly kunzvimbo inonzi Milan. Kuda kwake mujaho kwakaramba kusingazununguki uye kusingazungunuke. Nekudaro, akaenderera mberi nekuisa simba rakawanda mukugona mutambo.
Mufananidzo wekutanga waPierre Gasly.
Pierre Gasly Mhuri Yemhuri:
French Champ inobva kumhuri yekota. Ambuya vake, Evelyn aive mukwikwidzi wekarting muNormandy muma60s. Nenzira imwecheteyo, baba vake, sekuru, uye mukoma nemunin'ina vaive makota.
Imba yeGasly yaive yepakati-kirasi anotambira. Vakanga vaine zvakakwana uye hapana chimwezve chekuwedzera kuchengetedza nhengo yega yega yemusha. Dzidzo yavo, kudya, pekugara, uye mbatya zvaisava dambudziko zvachose.
Pierre Gasly Mhuri Kubva:
Mujaho wechiFrench akaberekerwa muBois-Guillaume muRouen, guta rinozivikanwa nebudiriro yaro munguva yepakati.
Isu tinoziva vanhu vanobva kuRouen seRouennais. Baba vake nasekuru vese vaive maFrench uye vakakurira kuNorthern France, vese mukati meRouen nharaunda.
Saka, zvichataura kuti ane tarenda Kart Racer chiFrench kubva mudunhu reNormandy uye nerudzi rwevachena. Pazasi pane Mepu inoratidza mune zvine musoro mazwi mhuri yake midzi.
Mepu inoratidza mhuri yaPierre Gasly.
Pierre Gasly Bio - Basa rekutanga:
Kunyangwe zvakadaro anga achimhanya kunge makore matanhatu, paive pagumi paakapinda mumakwikwi eartart muna 2006. Mudiki Gasly akapedza regumi neshanu muFrench Minime Championship.
Nekudaro, akavandudza nekupedza chechina gore rakatevera. Zvichienderera mberi, muna 2008 Pierre Gasly akakwira kuFrench Cadet Championship, asati aenda kune yepasi rose chiitiko Muna 2009. Akaenda muchikwata cheKF3 (kart racing kirasi yevechidiki vechidiki kutyaira vechidiki).
Akaramba ari muchikwata cheKF3 kusvika pakupera kwa2010 paakabuda semumhanyi muKomisheni Internationale de Karting (CIK-FIA) European Championship. Nekuda kweizvozvo, ichitungamira chizvarwa chitsva cheFrench Sports.
Pierre Gasly (pakati) paCIK-FIA European Championship muna 2010.
Pierre Gasly Dzidzo:
Kunyangwe hazvo Mujaho wechiFrench akatanga basa rake achiri mudiki kudaro, akange achine nguva yekutarisira kune zvaanoda ruzivo.
Akapinda chikoro chepuraimari chakazvimiririra muRouen. Nekudaro, nekufamba kwenguva, dzidzo yepamutemo yakava chigumbuso chebasa rake remujaho uye saka aifanira kuenda kuzvikoro zvisina kurongwa zvevatambi nenyanzvi dzemitambo.
Akadzidza hunyanzvi hwepfungwa, hwakadai semafambiro akadzidzwa anoshandiswa nevatambi senge kukurudzira, kuzvivimba, kudzora kumutsa, uye hukama pakati pevanhu pamwe nedzidzo pamusoro pehutano hwehutano.
Pierre Gasly panguva yekudzidzira kwake zvisina kurongwa.
Pierre Gasly Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Mu2011, iyo Racer yakaita yake yekutanga mune imwechete-zvigaro nekutora chikamu muFrench F4 Championship, kwaakabuda kechitatu. Akaenderera mberi nekuvandudza kuita kwake mujaho sezvo nguva yakafamba.
Pakazosvika Gumiguru 2013, mushure mekurwa kwakaomarara naOliver Rowland, Gasly, akahwina iyo Formula Renault 2.0 Eurocup kuve iye mutyairi mudiki kutora zita iri. Uye zvakare, Gasly aivewo mumhanyi-kumusoro ku2014 Formula Renault 3.5 Series.
Heino Champ paFormula Renault 3.5 muna 2014.
Nenguva isipi, akaramba achikwikwidza mune mamwe makwikwi, achichinjira kuGP2 Series.
Izvi zvakabudirira zvakagadzira nzira yekusimudzirwa kwake kuchengetera mutyairi weRed Bull Racing Formula One timu, zvichimuunza nhanho imwe padyo nechiroto chake chekuwana mbiri yeF1.
Pierre Gasly Biography- Kumuka Mukurumbira Kubudirira Nhau:
Achishanda nzira yake kuenda kumusoro, Pierre Gasly akazove shasha ye2016 GP2 Series uye Akaita yake yekutanga F1 muna 2017 naToro Rosso ku2017 Malaysian Grand Prix.
F1 kutanga muna 2017 naToro Rosso ku2017 Malaysian Grand Prix.
Kunaka kwake achiri kutamba kwakaita kuti Gasly asayinwe neRed Bull Racing yemwaka wa2019, kwaakapinda. Max Verstappen kwehafu yekutanga yemwaka.
Kutevera munguva pfupi muna 2020 kwaive musikana wake weScuderia AlphaTauri ane nhoroondo F1 Kukunda kuItaly Grand Prix (GP) kuMonza. Ona zvimedu pazasi.
Yakanga iri yekutanga kuhwina kubvira Olivier Panis akahwina iyo 1996 Monaco Grand Prix yemutyairi weFrance.
Nekudaro, Gasly akaramba achitora mapoinzi nekuenderana kweAlphaTauri, yakabatana neJapan rookie. Yuki tsunoda. Zvino muna 2021, yakatora nzvimbo yechitatu kuAzerbaijan Grand Prix Baku, Azerbaijan.
Gasly achipemberera kukunda kwake kuAzerbaijan Grand Prix Baku, Azerbaijan, 2021.
Caterina Masetti Zannini Pierre Gasly Rudo Hupenyu:
Achangopedza kukunda kwake kwekutanga Formula 1 mujaho we2020 Italian Grand Prix, Pierre Gasly ari pakati pemazita anonyanya kupisa munyika yemujaho, kunyanya kumadzimai.
Kunyangwe asina kuroora, Pierre Gasly akange ambofambidzana neItari Mukadzi, Caterina Masetti Zannini.
Vakaroorana vakapinda muukama muna 2018. Nyaya yavo yakaenderera mberi zvakanaka, pasina matambudziko vasati varambana muna 2020.
Nekudaro, pachine runyerekupe rwekuti vanoonana kuseri kwekamera. Caterina Masetti Zannini injiniya yemuchadenga uye anobva kuBologna.
Pierre Gasly Mhuri Chokwadi:
Mujaho weKart unomhanya kuburikidza nemhuri yaPierre Gasly yakakura kwazvo. Vanasekuru vake, baba, uye vanin'ina vake vese vane ruzivo rwemujaho, asi hapana mumwe akasvika pakukwirisa sezvakaita Pierre muFormula 1. Tichitakura izvi pamoyo, ngatitorei kukurumidza kweumwe neumwe wavo.
Mufananidzo wekutanga waPierre Gasly nemhuri yake.
Nezve Baba vaPierre Gasly:
Sezvambotaurwa, baba vaPierre Gasly, Jean Jacques Gasly, mumhanyi uye mujaho wekart. Akauya munyika muno nemusi wegumi neshanu waGumiguru 15.
Jean akakwikwidza muzvikamu zvakasiyana zvemijaho, kusanganisira Karting, kutsungirira; mujaho wekuyedza kusimba kwemidziyo, uye kutsungirira kwevatori vechikamu.
Mufananidzo wababa vaPierre Gasly, Jean Jacques Gasly.
Jean Jacques Gasly akakwikwidzawo mu uye rallying (motorport inobata mumigwagwa yeruzhinji neyepachivande ine mota dzakavakwa dzemumugwagwa-dzemutemo).
Ane kambani yezvivakwa uye mamwe makambani mashoma anobatanidzwa muindasitiri yemachira. Mushure mekuparadzana kubva kune waaimbova mudzimai wake, akaroora Pascale Gasly.
Mufananidzo unofadza waPeter Gasly nababa vake.
Nezve Amai vaPierre Gasly:
Kuseri kwemutyairi wega wega Formula 1 kune network yakakura yekutsigira. Imwe yerutsigiro rwaPierre Gasly yaive amai vake, Pascale Gasly.
Pasinei zvapo nedzvinyiriro yemari yaibatanidzwa, aitarisira mwanakomana wake zvakanaka uye akawana tsigiro yake yakazara achironda zviroto zvake.
Iye anodawo emakwikwi emota uye akaroora kuna baba vaPierre, Jean Jacques Gasly. Kunyangwe hazvo akaroora kare uye akaita vana vaviri mumuchato wake wekare.
Mumwe wekutsigirwa naPierre Gasly aive amai vake, Pascale Gasly.
NezveVanun'una vaPierre Gasly:
Sezvatakambotaura, Pieres Gasly ane vana vana mukoma (Nicolas Caron, Cyril Caron,
Phillipe Gasly naPaul Gasly).
Nepo vaviri vekutanga, Nicolas Caron naCyril Caron, vanobva kumuchato waamai vake wekare, Phillipe Gasly naPaul Gasly vanobva kuhukama hwababa vake hwekare.
Kunyangwe zvisiri zvakawanda isu zvatinoziva nezve vana vana mukoma vaPierre Gasly. Nekudaro, Phillipe Gasly naPaul Gasly, kungofanana nenhengo zhinji dzemhuri, vanoda mota mujaho uye vari muKart mujaho muFrance.
Nezve hama dzaPierre Gasly:
Iyo French Formula Imwe Nyeredzi mujaho ane akawanda mazhinji dzimwe nhengo dzemhuri dzakawedzerwa. Iye ana babamunini, vanatete, vazukuru, babamunini, babamunini, nasekuru nasekuru. Nekudaro, isu tinogona chete kutaura zvakawanda pamusoro pasekuru vake.
Vanasekuru vaPierre Gasly:
Jean Gasly muzukuru waPierre Gasly. Iye nhengo yeFrench Karting timu ya1961. Moreso, mbuya vaPierre Gasly ndiEvelyn Gasly. Iye akazvarwa muFrance uye zvakare ari
Evelyn aive mukwikwidzi wedunhu reKarting muNormandy, France, muma1960. Muchato wake naJean Gasly wakaburitsa baba vaPierre Gasly, Jean -Jacques Gasly.
Iye Champ yeFrance mudiki uye akanaka mujaho mutyairi ane akagwinya utano mutambi mutambo kuvaka uye hunofadza hunhu. Asi kunyangwe wepasi rose kirasi Fomula 1 mutyairi anoda imwe nguva yekuzorora.
Nguva dzebhasikoro inguva dzinonakidza.
Pierre Gasly anofarira skiing, uye zvaanofarira zvinosanganisira badminton, tenisi, squash, kuchovha bhasikoro, nhabvu / nhabvu, uye kutamba.
Iye ane mukurumbira pasocial media, neyake Website uye kunyanya Instagram, ine vateveri vanokwira vanopfuura mamirioni maviri.
Anoda kutora selfie nevamwe vake vane rudo mafeni.
Nemakundano uye kukunda, Pierre Gasly akazviwanira iye zvakaringana kurarama hupenyu hwezviroto zvake asingafunge nezve mutengo. Saka nei achifanira kugadzirisa hupenyu hwakajairika?
Kunze kweimba yake inodhura muFrance, iyo nyeredzi mutyairi ane maBRM mawatch Neyekugadzira kwavo dhizaini, ine simba yekuita, uye hunyanzvi hwekugadzira. Yake BRM wachi yakanyorwa pairi zita rake. Mutengo wemaBRM watches anotangira pamadhora zviuru makumi mashanu.
Moreso, iye ane, Tag Heuer anotarisa anokosha madhora zviuru mazana matanhatu nemazana mana, mbatya, zvishongo, magirazi, uye maheti ekumhanyisa zvese izvo zvinofanirwa kunge zvakaita mutengo wakakura.
Anopisa neake TAG Heuer's 45 mm nhema simbi isina wristwatch inokosha $ 6,400.
Isu tinoziva Pierre Gasly nekuda kwekuvimba kwake uye nekumhanyisa achityaira. Iye ane mota dzinoverengeka uye zhinji dzadzo dzinotarisirwa mota dzemitambo! Anobata Honda NSX, inoita $ 190,000, neAston Martin DBS, Superleggera, iyo inokwana kuita $ $ 329,000.
Pierre Gasly Cars - Ane rudo neiyo yakasarudzika Honda nhevedzano.
Seyakakurumbira fomula 1 mujaho mutyairi uyo akawana zita hombe uye mukurumbira mune rake rese basa. Pierre Gasly akaita mari yakati wandei. Kwake kwekutanga sosi yepfuma kunobva pabasa rake semutyairi wemujaho.
Pierre Gasly paakave akazara-akazara F1 mutyairi naToro Rosso mumwaka we2018, muhoro wake uri ungangoita 270,000 pagore. Mubhadharo iwo wakasvetuka kusvika pa- $ 1million paakaziviswa seMax Verstappen's new partner kuRed Bull yemwaka we2019 nekukurumidza Daniel Ricciardo yaizosiya timu kuRenault.
Mambure aPeter Gasly anosvika $ 2.8 mamirioni angangoita, sekureva kwaNetworthleaks. Zvakare, muhoro wake wepagore uri $ 2 Mamirioni. Iye, pamusoro pezvo, anowana mari nekuonekwa kwake mune mamwe mazita emitambo anomhanya akadai seJapanese Super Fomura uye Fomura E (imwechete-seater motorsport mukwikwidzi wemota dzemagetsi).
Pierre Gasly anoitawo yakawanda yakanaka mari kuburikidza nemabheji endorsements. Yake yepamutemo webhusaiti inonyora odhiyo kambani, Bloomberg, Iyo Grid driver agency, uye magirazi ezuva
kambani Hawkers sevashandi vake vakuru vezvokutengeserana.
Pierre Gasly Untold Chokwadi:
Kunze kwenyaya yehupenyu yakataurwa kusvika parizvino, hezvino chokwadi chinonakidza nezvemutyairi weF1 nebasa rake rekumhanya.
Chokwadi # 1: Dhimoni chiitiko:
Gore ra2020 rakaona Pierre Gasly akaderedzwa naRed Bull kune rimwe rechipiri-timu, iro Pierre akaita mbeveve. Kungofanana nemishumo, mhinduro chete yaaigona kupa yaive ye-pa-iyo-track kuburikidza nezvaakaita. Gore rimwe chetero akashamisa vateveri vake nekuhwina iyo Italian Grand Prix.
Akavhundutsa vateveri vake nekuhwina iyo Italian Grand Prix mu2020.
Chokwadi # 2: Mumvuri waAnthoine Hubert:
Pierre aive nehukama hwepedyo naye Anthony Hubert izvo zvakatanga kubva paUdiki. Chiitiko ichi chakaitika nguva pfupi achangoburitswa neRed Bull. Saka, kufa kwaAnthoine yaive nguva inotyisa; zvine hungwaru hwakaomesesa hupenyu hwaPierre nebasa rake.
Mujaho weFrance anoonekwa pano achikwira makomo neshamwari yake yehudiki, Anthoine Hubert.
Chokwadi # 3: Covid-19 Bvunzo:
Iye muFrance anova wechitanhatu wevatyairi veFormula 1 kubvumirana Covid-19; Sergio Perez ndiye akatanga. Pierre Gasly akazvisarudzira ega mushure mekuyedza aine coronavirus, achichengetedza zvirevo zvemunharaunda zvehutano. Zvakare, achitevera chirongwa chake chekudzidzisa kumba.
Chokwadi # 4: Pedyo-inouraya tsaona:
Muzhizha ra2016, Pierre Gasly akaenda kuSilverstone kumakwikwi eGP2 nevabereki vake. Nehurombo, mhuri iyi ndiyo yakawirwa nenjodzi yemumugwagwa. Aive kumashure, pakati, amai vake vakagara kuruboshwe.
Mota yakarovera ndokupidiguka kana, ndokusiya ropa rakazara mumotokari. Tsaona iripedyo-inouraya yakapotsa yapedza hope dzake. Achiuya nerombo rakanaka asina kukuvara kubva mukuparara, Gasly akakunda iyo GP2 mujaho wekunonoka mukupera kwevhiki uye akatsaurira kukunda kwake kuna amai vake vari muchipatara.
Pierre Gasly Biography pfupiso:
Kuti uwane pfupiso yekukurumidza yehupenyu hwake nhoroondo nekutarisa, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo hupfupi nezve inozivikanwa Fomula One mujaho.
Pierre Gasly Biography Dhata
Zita rizere: Pierre Gasly
Zuva rekuzvarwa: 7th Zuva raFebraury 1996
Nzvimbo yekuzvarirwa: Rouen
Basa: Mujaho Womhanya
Baba: Jean-Jacques Gasly
Amai: Pascale Gasly
Vanun'una (Vakoma) Nicolas Caron, Cyril Caron, Phillipe Gasly naPaul Gasly
Vehukama (Vanasekuru): Jean naEvelyn Gasley
Ex-Musikana: Caterina Masetti Zannini
kukwirira: 5 ft 10 inches (1.78m)
Muhoro: $ 2 Million
Dzinza / Race: French-Muchena
Tine tarisiro yedu kuti wakanakidzwa naPierre Gasly Biography uye Nyaya Yevacheche. Isu tinomuziva iye semunhu anoshanda nesimba, uye nekuda kwekuzvipira kwake, anokwanisa kunge asvika pakukwirira kwakanaka pabasa rake. Ndiye wekutanga wechiFrench mumakore anopfuura makumi maviri kuhwina mujaho weF20.
Kwaari, hapana zviitiko zvisingafadzi. Pane zvimwe zvidzidzo zvekudzidza, ingave yakanaka kana neimwe nzira. Pierre Gasly haaregi muzviroto zvake uye anoedza zvakanyanya kuti arambe achipisa nzira.
Tinovimba iwe unowana Pierre Gasly Biography uye Yehucheche Nyaya kuti ibatsire. Kana iwe uine chero chimwe chinhu chingatibatsire maererano nemaitiro akanakisa, titumire komendi uye utizivise. Zvikasadaro, ndinokutendai nekuverenga uye rambai makabatana kune hwakawanda hwenyaya chokwadi neepamusoro-notch kunyatso.